Dhar xayawaan qiroweyn A, dheeldheel Park fuula - Ocean Art
Product kala soocidda
xayawaan qiroweyn Animatronic
City Ocean Zigong Art Co., Ltd.
(Halkan loogu yeeri sida Ocean Art), waxaa la aasaasay sanadkii 2009-kii, oo ku yaalla High-tech Industrial Park, Zigong City, Gobolka Sichuan, waana shirkad isku dhafan sayniska iyo farsamada, taas oo ku takhasusay design & horumarinta, soo saaridda, iibka, iyo bandhigyo ee alaabta matalaadii. Ocean Art diiradda on cilmi-baarista iyo horumarinta ee dinosaurs animatronic, xayawaanka jilitaanka iyo cayayaanka, fossils xayawaan qiroweyn iyo Qalfoofkii, dhirta qadiimiga aan dabiici ahayn, beerta kabxidda aasay, Bbc Ghadafi oo marayay dhar xayawaan qiroweyn iyo alaabooyinka kale ee matalaada.
Su'aalaha ku saabsan waxyaabaha our ama liiska qiimaha, kaliya nala soo xiriir! baaritaan
Liiska Case bandhigay
gudcur ma noqon karaan sababta in carruurta ay joojiyaan ka booqanaya park xayawaan qiroweyn theme ah, iyo haddii ay taasi caddayn ugu fiican.
The lix iyo lixdan xiddigaha ugu horeysay xayawaan qiroweyn Shiinaha ee Haitang Bay park xayawaan qiroweyn waa nuxurka cilmi xayawaan qiroweyn ee Shiinaha. Waxaa oo dhan soo bandhigay jidka 1: 1 model weyn asalka ah. The Lixdan iyo lix nooc oo xayawaan qiroweyn animatronic oo noo by maded ee park ayaa la rakibay. dinosaurs waxay ka kooban yihiin ee lafaha steel oo dusha gel silica. Bay u noqon karaa jirka oo ay ka dhigi dhawaaqa, iyo jilitaanka waa mid aad u sarreeya.
2016 Summer.Everyone jecel yahay in uu arko dinosaurs ee park theme maxaa yeelay waxa uu keeni doonaa farax dheeraad ah. Gaar ahaan loogu talagalay carruurta, waxay waalan oo ku saabsan dinosaurs animatronic yihiin. Currently, ugu of beeraha theme leeyihiin animatronics kala duwan xoolaha oo lagu daydo, gaar ahaan dinosaurs in caawiyo si loo soo jiito more visitors.And this park xayawaan qiroweyn Ruush waa tusaalaha ugu wanaagsan.
More Products Best-iibinta
Mechanical Dinosaur, Chinese New Year Dragon Costume, Walking Ride On Dinosaur, Giant Animatronic Dragon, tareenka xayawaan qiroweyn , Animatronic Dragon For Sale,